Malagasy page 1 of 1 - English-Video.net
TED Talks with Malagasy transcript
Ludwick Marishane: Mandro tsy misy rano
2012-05-03 1,694,188 views
Raha iray kilometatra isan'andro no alehanao hahazoanao rano iray siny, toa ny ataon'ny olona an-tapitrisany eto an-tany, mety tsy ho lanianao handroana kosa angamba iny rano iny fa lafo vidy loatra. Mitantara ny fomba nahatongavany tamin'ny famoronany ity akora mora vidy, madio ary manamora fiainana: ny DryBath, fanosotra voalohany eto an-tany mahasolo ny fandroana, i Ludwick Marishane, mpianatra mpandraharaha vao erotrerony. Tantara mahatsikaiky ihany nefa mahavariana ihany koa.
Candy Chang: Alohan'ny hahafatesako, te-...
2012-07-23 5,640,247 views
Ao amin'ny tananany ao Nouvelles-Orléans, i Candy Chang, mpanakanto sady TED Fellow dia nanova trano haolo iray ho lasa solaitra be ahafahana mamaly ilay fanontaniana hoe: « Alohan'ny hahafatesako, te- ___. » Ny valinten'ireo mpiray vodirindrina aminy dia mahagaga, mafonja ary misy mampihomehy, hany ka lasa fitaratra tsy nampoiziny. (Inona ary no valinteninao ?)
Eduardo Paes: Ireo fitsipika 4 mikasika ny tanàn-dehibe
2012-02-29 895,083 views
Eduardo Paes dia ben'ny tanana'i Rio de Janeiro, tànana hafa kely, sarotra atao, mahafinaritra ihany koa ary misy mponina 6.5 tapitrisa. Mizara hevitra efatra izy mikasika ny fitantanany ny tanàna -- sy ny tanàn-dehibe rehetra -- milaza ny ny hoavin'izy ireny izy, ary mizara fanapahan-kevitra lehibe (azo atao tsara) ho fanavaozana ny fotodrafitrasa ary koa ny fomba atao mba ho tanàn-dehibe "manara-penitra".
Rachel Pike: Ny siansa ao ambadik'ireo lohantenin-dahatsoratra mahakasika ny toetrandro
2009-07-24 787,904 views
Mandritry ny 4 minitra, no anomezan'i Rachel Pike, manam-pahaizana simista momba ny atmôsfera, sombitsombiny amin'ny ezaka goavana nahatongavana amin'ireo lohatenin-dahatsoratra mikasika ny fiovan'ny toetrandro, ataony miaraka amin'ny iray tarika aminy--tarika iray ao anatin'ny arivo mandray anjara--itantarany ny sidina mampidi-doza nataony ambonin'ny ala mando, mikatsaka môlekiola manan-danja anankiray.
Adam Grosser sy ny fampangatsiahana maharitra
2007-02-02 973,042 views
Adam Grosser dia hiresaka amintsika tetikasa fanamboarana vata fampangatsiahana tsy mampiasa herinaratra, ary hamatsy io fitaovana io amin'ireo tanàna sy ireo hopitaly samihafa eto an-tany. Avy amin'ny fandalinana teknolojia efa taloha be tany, dia nahaforona fitaovana mandeha izy.
Richard St. John's sy ireo Tsiambaratelon'ny Fahombiazana miisa 8
Fa Maninona ny olona no tafita ? satria ve izy ireo manan-tsaina? Sa ve izy ireo manambitana ? Tsia. Ny Mpikaroka Richard St. John dia nanao famintina 3 minitra amin-tsika amin'ny alalan'ity sary mihetsika ity. Fanadihadiana izay nataony nandritra ny taona maro ary hizarany amintsika "ny tena tsiambaratelon'ny fahombiazana"